तपाईं वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ प्रकाशको पुस्तकमा अगमवाणी गरिएको थुमाद्वारा खोलिएको चर्मपत्रको सानो मुट्ठो हो भनी गवाही दिनुहुन्छ। हामी त्यो कुरामा विश्‍वास गर्दैनौं। हामी विश्‍वास गर्छौं, “चर्मपत्रको सानो मुट्ठो” ले बाइबललाई बुझाउँछ, बाइबल चर्मपत्रको सानो मुट्ठो हो, र हामीले बाइबल मात्र पढ्नु नै पर्याप्त छ। | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
अघिल्लो: तपाईं वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छमा परमेश्‍वरका नयाँ वचनहरू छन् भनी गवाही दिनुहुन्छ, तर प्रकाशको पुस्तकले स्पष्ट रूपमा बताउँछ, “किनकि यस पुस्तकका अगमवाणीका वचनहरू सुन्‍ने हरेक मानिसलाई म गवाही दिन्छु, यदि कुनै मानिसले यी कुराहरूमा थप्यो भने परमेश्‍वरले यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू त्यसलाई थपिदिनुहुनेछ” (प्रकाश २२:१८)। के त्यसो गर्नु बाइबलमा थप्नु होइन र?
अर्को: बाइबल परमेश्‍वरको कामको गवाही हो। हामी प्रभुमा विश्‍वास गर्नेहरूले आकाश र पृथ्वी अनि सबै थोक परमेश्‍वरद्वारा सृष्टि गरिएका हुन् भनेर बाइबलकै आधारमा स्वीकार गर्छौं। बाइबलकै कारण तिनीहरूले परमेश्‍वरका कामहरूको आश्चर्य, महान्‌ता, र सर्वशक्तिसम्पन्नतालाई देख्छन्। त्यति मात्र होइन, बाइबलमा परमेश्‍वरका धेरै वचनहरू र मानिसको अनुभवका गवाहीहरू छन्, जसले मानिसको जीवनका लागि प्रबन्ध गर्न सक्छ, र मानिसलाई धेरै सुधार गर्न सक्छ। के हामी बाइबल पढेर अनन्त जीवन पाउन सक्छौं? वा के बाइबलमा अनन्त जीवनको बाटो छ?
सन्दर्भका लागि बाइबल पदहरू: “येशूले अरू धेरै कुराहरू पनि गर्नुभयो, जसलाई एक-एक गरीलेखिएमा, मलाई लाग्छ कि लेखिएका पुस्तकहरू संसारभरिमा पनि...